Teny: Ndeha Handefa Siokantsera Sy Hiteny Quechua · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Novambra 2011 16:36 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Nederlands, Français, Aymara, Italiano, Ελληνικά, polski, Español, English
Ity dia ampahany amin'ny savaranonando ataonay momba ny “Fampiasàna ny Median'Olon-tsotra Hanandratana Ireo Teny Zara Raha Misy Mahafantatra”
Ndeha ho lazaina hoe naniry foana ianao hianatra ny Quechua, tenim-bazimba tenenina any amin'ny faritry ny Andes any Amerika Atsimo, saingy tsy nanananao ny fotoana handehanana manaraka fampianarana ara-dalàna tany an-tsekoly. Ankehitriny ny tetikasa iray antsoina hoe Hablemos Quechua (Ndao hiteny Quechua) dia nandrafitra fomba hanomezana lesona isan'andro amin'ny alàlan'ny Siokantsera mba hanampiana amin'ny fanorenana vokabolary ho an'ireo mpianatra liana.
Ilay tetikasa dia misora-tena ho “andrana ara-teknika-sosialy sy kolontsaina mba hamerenana ny fifandrohizana indray”, ary novolavolaina tao amin'ny Escuela Lab, “hackspace” iray ao Lima, Pero. Ilay tarika dia ahitàna an'i Kiko Mayorga, sy ilay ‘developpeur’ Mariano Crowe, ary Irma Alvarez Ccoscco, poety Quechua iray sady mpandika teny avy amin'ny fikambanana Runasimipi. Ny vokatr'ity fiaraha-miombon'antoka ity dia ny kaonty Twitter (@hablemosquechua), izay manana mpanjohy eo amin'ny 1700 eo amin'izao fotoana. Maka ny fàkany avy amin'ny angona teny espaniola ilay fandaharanasa ary ny dikan'izy ireny amin'ny teny Quechua mba hanolorana vokabolary mifanitsy:
Ny teny Quechua ho an'ny hoe "voninkazao" dia mety hoe t'ika
Mandefa quizz madinika amin'ny alalan'ny siokantsera ihany koa izy io izay itarihana ireo mpanjohy mba hamerina ny lesona teo aloha:
Tsaroanao ve ny dikan'ny hoe t'ika?
Manana tenim-paritra maro ny teny Quechua ary samihafa daholo isaky ny faritra tsirairay avy, miteraka fahasamihafana eo amin'ny teny sy ny fanononana. Zavatra iray fantatry ny tetikasa mazava tsara mihitrsy izany [es], izay mahatonga azy ireo hiala tsiny raha nisafidy ny teny Quechua tenenina any amin'ny faritr'i Cusco-Collao,Pero ho ny tenim-paritra amiasaina ao amin'ilay tetikasa. Io no antony voalohany indrindra ampiasàna ny fehezanteny hoe “Ny teny Quechua ho an'ny hoe “voninkazao” dia mety hoe t'ika” amin'ny teny Quechua any amin'ireo siokantsera, toy ny fomba anekena fa mety misy teny hafa any azo ilazana koa ny voninkazo.
Iray amin'ireo fanamby atrehan'ny tetikasa ato anatin'ny volana maromaro hoavy, ny fitadiavana famatsiam-bola hanitarana ny fandaharanasa. Misy ny fanantenana ny amin'ny hahafahana hitantanana ireny fahasamihafàna amin'ny tenim-paritra ireny, hatramin'ny fanaovana izyìay handraisana an-tànana bebe kokoa ny fifandraisana sy ny fifanakalozana valinteny avy amin'ireo mpanjohy azy. Mety ho ampiasaina betsaka ihany koa ho an'ireo teny any amin'ny vondrom-parahamonina hafa ilay tetikasa izay te-hampiasa ny Twitter ho toy ny làlana hanomezana lesona fohy sy vokabolary amin'ny fomba malaky ho an'ny mpianatra ireo teny zara raha misy mahafantatra.